Hada ku cadaadi sawirada Squoosh, barnaamijka cusub ee Google web | Abuurista khadka tooska ah
Manuel Ramirez | | Tricks, dhowr
Squoosh waa barnaamij cusub oo websaydh ah oo weyn G taasi waxay imaaneysaa si aad u cadaadin kartid sawirada adigoon lumin wax tayo ah inta aad kujirto. Imaatin buuxa oo ah qalab asal ahaan loogu talagalay horumarinta.
Waa xaqiiqo aan u baahanahay ku dheji sawirada cabirkooda saxda ah martigelinta degelkeena oo lagu cadaadiyo hab aysan u malaynaynin inuu rar saa'id ahi yahay. Sidan oo kale waxaan ku ilaalin doonnaa xawaare ku filan oo xamuul ah si markaa Google ay noogu abaal mariso meeleynta mashiinka raadintayada.
Sababtaas awgeed, Squoosh waa qalab weyn oo noo oggolaanaya ka guuri rakibidda barnaamijyada sida Resizer ama Photoshop laftiisa shaqooyinkan maalinlaha ah. Waana taas Squoosh wuxuu kuu ogolaanayaa inaad cadaadin karto sawirada, bedesho qaabkooda ama xitaa hoos u dhig cabirkiisa si loo daboolo baahideena.
Mid ka mid ah waxyaabaha gaarka loo leeyahay ee 'Squoosh' waa taas isticmaal WebAssembly, koodh sawir-qaadis ah oo aan badanaa laga heli karin biraawsarkayaga asal ahaan.
Squoosh ayaa noo ogolaanaya u rogo sawirada qaabab fayl ah qaabab badan oo muuqaal ah sida JPG iyo PNG oo caan ah. In kasta oo ay waliba horseedayso u beddelashada qaabab kale oo ku habboon websaydhada. Waxaan ka hadlaynaa MozJPEG ama WebP.
Sidoo kale waa hoot in waxaan arki karnaa sawirka asalka ah isla waqtigaas iyo sida ay noqon doonto waqtiga dhabta ah ee kale. Taasi waa, waxaan u dhaqaaqi karnaa slider si aan u hubino faraqa tayada. Qaddarka xogta la isku adkeeyay iyo boqolkiiba inta laga helay iyada oo loo marayo Squoosh si loo cadaadiyo sawiradayada ayaa sidoo kale la bixiyaa.
Mid kale oo ka mid ah waxyaabaha u gaarka ah, ee swaa barnaamij ka mid ah websaydhada dhammaadka .app, ayaa ah inaad kaliya ubaahantahay inaad haysato internetka markii ugu horeysay ee aad rarto Squoosh, tan iyo markaasna waxaa laga heli karaa isla barowsarka laga helo kaydka.
Squoosh wuxuu noqdaa barnaamij weyn oo web si aad uga adeegsan karto biraawsar kasta oo aad si weyn u yareyn karto cabirka faylka adiga oo aan lumin iota tayada sawirka ah.
Halkan waad heshay squoosh.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » dhowr » Squoosh waa barnaamijka cusub ee Google ee webka si loogu cadaadiyo sawirada iyadoon wax tayo ah lumin